Nairobi oo noqotay Xarunta ololaha musharixiinta Mucaaradka - Awdinle Online
Nairobi oo noqotay Xarunta ololaha musharixiinta Mucaaradka
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa xilligaan waxaa ay marti gelineysaa siyaasiyiinta mucaaradka ee loolanka adag ugu jira u tartakida iyo helida kursiga Madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo maalmahaan ku sugnaa Muqdisho ayaa safar deg deg ah ku tegay Nairobi, waxaa sidoo kale la filayaa in Galabta uu halkaasi tago Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxaa Nairobi ku sugan Madaxweynihii hore ee Puntland Cabduweli Gaas musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo Xubno kale, iyaga oo la shirsan Madax ka socota dowladda Imaaraadka Carabta oo loolan ugu jirta inay hesho siyaasiyiin saameyn ku leh doorashooyinka dalka.
Madaxa Sirdoonka Geeska Afrika ee Imaaraadka Carabta oo degan Hotel ku yaalla Nairobi ayaa la kulmay Madaxweynaha Galmudug, waxaana la filayaa in kulamo kale uu la qaato siyaasiyiinta musharixiinta ah ee kasoo horkeeda Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleItoobiya oo maxkamad saareysa eedeysanayaashii dilay Fanaan Caan ahaa
Next articleXasan Sheekh” Farmaajo wuxuu rabaa in uu soo saarto dad u gaardiya”